2014 Faminaniana momba ny fironana amin'ny Internet | Martech Zone
Zoma, Febroary 21, 2014 Zoma, Febroary 21, 2014 Douglas Karr
Raha ny taona 2013 no taonan'ny atiny sy finday, angamba ity taona ity no taom-pandraisana. Izany hoe mametraka ny atiny eo imason'ny mpampiasa ny fotoana sy ny toerana ilany izany. Tsy miresaka momba ny fikarohana fotsiny no resahina fa miresaka momba ny fandefasana hafatra sy ny fampidirana antoko fahatelo.
Ity infographic avy amin'ny Netbiscuits ity dia manao an'io faminaniana io ihany. Mitombo hatrany ny fananganana finday smartphone, manome ny fahaizany geolocation henjana kokoa ary fitomboan'ny isan'ny fitaovana mifandray mba hahitana sy hifandraisana.
Azontsika atao ny manantena ny hahita fangatahana bebe kokoa amin'ny traikefa namboarina izay manome laharam-pahamehana ny tontolon'ny mpampiasa. Amin'ny maha iray amin'ireo fanamby goavana atrehin'ity marika ity amin'ny taona 2014, ity hetsika iray ity dia hanetsiketsika ny fomba tokony hifandraisan'ny fikambanana amin'ny mpanjifany. Tsy an'ny orinasa fotsiny ny marika. Miara-miasa amin'ny olona misafidy ny hifandray aminy izy ireo, ary amin'ny faran'ny taona 2014 dia mila averina mihoatry ny taloha kokoa noho izany ny teo aloha.
Ampidino ny tatitra anio hamaky ny tolo-kevitr'i Netbiscuit momba ny firotsahana anaty tranonkala fantsona mahomby.
Tags: teny manodidinafahatsiarovan-kevitraMarketing InfographicsFivarotana finday sy tablettenetbiscuits